Dowladda Oo Ka Hadashay Wixii u Qabsoomay Todobaadkii Tagay – Goobjoog News
Muqdisho, 06 June 2015 – Wasiirka Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska Mudane Maxamed Cabdi Xayir (Maareeye) ayaa ka warbixiyey horumarka Dowladda ee usbuucii la soo dhaafay.
Danbiile Al-Shabaab oo gacanta lagu soo dhigay
Ciidanka Hay’adaha Amniga ayaa howlgal ay ka sameeyeen deegaanka Tareedisho ee duleedka Muqdisho ayaa lagu soo qabtay Libaan Cabdulahi Maxamed oo ka tirsan Ururka Gumaadka Ummadda Soomaliyeed ee UGUS, isla markaana lala xariiirinayo in uu ka dambeeyey dilal qorshaysan oo ka dhacay gobolka Banaadir. Afhayeenka Wasaaradda Amniga Gudaha Maxamed Yusuf Cismaan ayaa sheegay in horjoogahan lagu soo qabtay howgallo ay ciidamada ka sameeyeen duleedka Muqdisho. Horjoogahan ayaa ka qayb qaatay dilal faro badan oo ugu horeeyey Allaha u naxariistee Gaashaanle Sare Dhabareey oo ka tirsanaa Hoggaanka Socdaalka iyo Jinsiyadaha, sidoo kale Cabdifataax Barre Guure, Guddoomiye ku-xigeenkii degmada Wadajir oo lagu dilay gudaha degmadaasi, iyo sidoo kale Cumar Ubax oo ka tirsanaa Wasaradda Gaadiidka. Horjooge Liiban Cabdullahi Maxamed oo markii uu howl galayo ayuu kooxda UGUS u isticmaali jiray magacyada Cabdulqaadir iyo Maxamed Cabdullahi. Ninka labaad ee la soo qabtay ayaa ah Aadan Cabdullahi Maxamed, iyagoo watay gaariga taargadiisa tahay EI1604. Inkastoo kooxaha Nabadiidka Al-Sahabab ay isku dayayaan in ay dhibaateeyaan bulshada ayaa hadana waxaa bar-bar socda howlgallo hay’adaha amniga ay kaga hortagayaan dhibaatooyinkaasi, iyadoo horey loogu guuleystey in la fashiliyo dhagaro badan oo ay soo maleegeen maleeshiyaadka Kooxda UGUS.
Deegaanka Tooratoorow oo laga saaray kooxda Al-Shabaab
Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed ayaa 2dii Juun 2015 weerar ku qaaday Deegaanka lagu magacaabo Tooratoorow oo hoostaga gobalka Shabeelaha Hoose halkaas oo ay hore dadka ugu dhibaateyn jireen maleeshiyaadka Ururka Gummaadka Umadda Soomaaliyeed ee UGUS. Abaanduulaha Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed Jen C.rasaaq Khaliif Cilmi ayaa sheegay in ciidamada ay galeen deegaankaasi iyaga oo aan la kulmin wax iska caabin ah, isla markaana hadda lagu howlanyahay baaris lagu sameynayo xaafadaha si looga hortago in ay bulshada ku dhex-dhuuntaan kooxaha dhagarqabayaasha ee UGUS. Jen C/risaaq ayaa sheegay in ciidamada ay deegaankaasi ku soo dhaweeyeen dadka deegaanka isagoo sheegay in Salagle iyo meelaha ay ku harsanyihiin si dag dag ah ay ciidamadu u gaari doonaan. Deegaankan ayaa istiraatiiji u ah howlgalka maleeshiyaadka UGUS looga sifiyenayo deegaanada farakutiriska ah ee ay kaga harsanyihiin gobalka Shabeelaha Hoose isaga oo sidoo kalana marin muhiim ah oo ay isaga kala gooshaan u ahaa kooxaha argagixisada iyo kuwa ajaanibta ah ee ka barbar dagaalama. Howlgalka ay ciidamada Xoogga kula wareegeen Deegaanka Tooratoorow ee gobalka Sh.Hoose waxaa sidoo kale Qeyb ka ahaa Ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM.